Nohatsaraina ny fanisana sy fitsirihana ny tena isan’ny mpiasam-panjakana marina. Misy mpiasam-panjakana 23.437 hatreto tsy fantatra na aiza izy ireo no miasa antsoina hoe “fonctionnaires fantômes”. Koa foanana avy hatrany ny momba azy ireo. Manomboka izao dia harahina akaiky avokoa ny tena isan’ny mpiasam-panjakana marina araka ny sokajiny sy ny andraikiny avy, ary foanana ny « remplacements numériques systèmatiques». Miisa 187.998 ny mpiasam-panjakana rehetra ka ny 75.320 ny fonksionera, 69.837 EFA, 7655 ECD, 1235 ELD, 4457 ECD PIP, 29.494 kosa dia mpiasam-panjakana any amin’ireo andrim-panjakana sy ny EPA ary ny EPIC. Mbola hitohy ny fitsirihana sy ny fanadiovana ny asam-panjakana sy ny mpiasam- panjakana.